Daisie ayaziswa ubuhle babo elula futhi athandeke nakakhulu. Lezi zimbali ngeke ukuhlobisa indawo, plus kungukuthi ikakhulukazi bafune enhlabathini nendawo. engadini Daisy, betshala nokunakekela lapho silula, blooms konke ehlobo eside. Kuye ezihlukahlukene kungenzeka izimbali elula, kabili noma ephuma kabili kabili.
Ngaphansi eyodwa igama ezivamile wawuhlanganisa uhlobo lwe of izitshalo zisetshenziswa futhi yonyaka okuqondene Asteraceae umndeni (Compositae). Iningi zinhlobo - kuba abakhileyo eYurophu nase esipholile Asia zone njengoba izinhlobo amazwe wathola Daisy e-Australia, eNew Zealand nase-Nyakatfo Melika.
Abantu abaningi ngephutha sikholelwe ukuthi owaziwa Daisy - imbali eyodwa. Empeleni, kuba inflorescence, futhi mikhulu ngosayizi. Basket onqenqemeni, kantsi sicuketse loku izimbali ijabulise. Ngokusho idatha ahlukahlukene, kufakwe bohlobo kusuka 25 kuya 70 izinhlobo. Ngo ukulima ethandwa kakhulu wathenga ingqikithi ezine.
esiphezulu Leucanthemum. Njengoba ayezalelwe isitshalo ukuze emithambekeni izintaba zasePyrenees ifinyelela ukuphakama 50-100 cm, kanye inflorescences enkulu kokuba ububanzi 10-12 cm, kungaba elula noma kabili. Isici ehlukile - emva kwesikhathi izimbali (kusuka July kuya frost). Ezinye izinhlobo engadini: Alaska (ngenhla), Beethoven, Little Princess, Isithwathwa Lady.
Daisy Alpine. Ukutshala nokunakekela athé ukwehluka. Lesi sitshalo sitholakala emaceleni ale ntaba, ukhetha okuxekethile, inhlabathi kahle akhanywa. Ideal for ekutshaleni iqembu, has a usayizi miniature - 15-20 cm ukuphakama. Zimbali ziba zinkulu, ephethe tinge bluish okuncane (isithombe lesine).
Leucanthemum vulgare - ajwayelane bonke edlelweni Daisy. isitshalo zisetshenziswa ukhula kufika ku-90 cm ubude futhi ubukhulu naphakathi izimbali (6-7 cm ububanzi). Izinhlobonhlobo: Indlovukazi Meyi, Sanssouci, Mastern, Maksima Koning, uVictoria Imfihlo, njll ...
Leucanthemum marsh. Amafomu nezihlahla ezinkulu-25 cm. Flowers ezinkulu, nge maphakathi enkulu ephuzi.
Beka i-Daisy engadini nomhlabathi
Kubalulekile ukwazi ukuthi uDaisy, ukutshala nokunakekela lapho, kuye ngohlobo kungahluka kancane kuphela, ukhetha izindawo libalele futhi okwanele. Ungakwazi Yiqiniso, wambeka esimweni ekhoneni shady yensimu, futhi lapho luyokhula, kodwa uhlobo nekhwalithi umbala uzohlupheka. Ikakhulukazi nozwelo umbiko we Daisy enkulu.
Ukusho ukuthi inhlabathi kumele kube evundile, futhi, ngoba imfuneko iyiphi isitshalo. Kuyadingeka ukuba sihlakulele inhlabathi kumuntu ka cm okungenani angu-30 ukujula, futhi endaweni eyolanda kahle akhanywa. On nenhlabathi abampofu engadini Daisy luyokhula, kodwa izimbali obmelchali. I esindayo futhi ukukhanya inhlabathi humus kuhle ukwengeza (15-20 kg 1 m 3). Amaxhaphozi Daisy ayifanele kubo, uyobe ngokuvamile ogulayo, ezilimele zinesikhunta kanye nobudala ngokushesha.
Daisy ezivamile: zokutshala nokunakekela entwasahlobo
Ukutshala imbewu ukuze izithombo ziqala ngo-March. Lungiselela ukwenza esitsheni esincane substrate ezinhle. Imbewu zinkulu, ngoba cindezela kubo akunzima. On the ungqimba inhlabathi oswakanyiswe nombala mbewu yabo ufafaze kancane kusukela umhlaba phezulu (0.5-1 cm). I amahlumela athoma ukuvela ngaphakathi isonto. Cishe ngemva kwenyanga ku ezitsheni ezihlukahlukene kudingeka ungene Daisy. Ukutshala nokunakekela i ekhanyayo izithombo zingenzeka kuphela ezindaweni efudumele. Kulokhu izitshalo ezisencane ngeke eziqhakaza onyakeni wokuqala, eduze ekwindla. Esise-Ural, eSiberia endaweni evulekile phansi izithombo abatshalwé maphakathi kuya ngasekupheleni kuka-May, emva usongo yesithwathwa ukubuyela pass. Njengoba izitshalo ezinkulu futhi ezihlabayo yakha, shiya ibanga-25 cm phakathi kwabo.
Leucanthemum - isitshalo nesomiso nemithi, ngakho ngisho inisele zezinhlobo abasebasha kudingeka kuphela ehlobo eyomile kakhulu. kunconywa ukuthi ngezikhathi ezithile Umanyolo eziyinkimbinkimbi umquba ukukhiqiza izimbali ezinkulu. Imvamisa - izikhathi 4-5 ngenkathi esebenzayo okhulayo, kusukela ngo-May. Ukuze wenze organic phendula Daisy elibi nenqwaba mass oluhlaza, kodwa ukubonakala imibala isikhathi kancane, ngakho-ke Kunconywa ukuba enze, kungakangeni ubusika.
Zonke izimbali ashwabene kuyo yonke inkathi kutuswa ukususa. Uma ungakujabulela usike neziqu empandeni, ngo ehlathini ekwindla uyoninika omunye wave imibala egqamile.
Daisy ezivamile: zokutshala nokunakekela ekwindla
Bush daisy kufanele ihlukaniswe njalo eminyakeni emithathu kuya kwemine, ngaphandle kwalokho lesi sitshalo angase afe. Lokhu arcade kwenziwa entwasahlobo and ekwindla, kodwa mhlawumbe Lithatha. Kumele kukhunjulwe ukuthi izinga basinde kulesi simo zimbi kakhulu. Lesi sitshalo entsha, ahlukaniswe elalivela esihlahleni umama, ngesikhathi nisela lokuqala edingekayo.
Izinhlobonhlobo izimbali ezinkulu kanye double ebusika badinga ikhava ukukhanya. Zamulchiruyte izihlahlana ungqimba namahlamvu omile (10-15 cm), ungakhohlwa ukususa nabo kwentwasahlobo, ukuze isitshalo akusho ibolile.
Omunye linesizotha kakhulu futhi enhle izitshalo engadini - a Daisy. Ukutshala nokunakekela akunzima, kodwa isitshalo uchayeke ukungenwa yizifo ezithile. Kulawa, ungakwazi ngokuvamile nazo Ukuswaba ukubola base stem, nezimanakanaka, nokugqwala, downy futhi powdery isikhutha, hrizantemnym emayini, edlelweni uhambo. ngokuvamile Isizathu kuyinto ehlobo nemvula. Njengoba nje ubona izimpawu isifo, lesi sitshalo Kunconywa ukuthi iphathe isixazululo 1% Bordeaux inhlanganisela. Inqubo kufanele liphindwe ngezikhawu izinsuku ezingu-10 3-4 of. Ungase futhi afafaze sezihlahla phezu kwezinkuni umlotha. Endabeni ka umonakalo ezinzima, susa lonke aboveground ingxenye futhi bashise, futhi amahlumela amasha zikhule emuva ngokushesha.
Ekuphetheni, kuyafaneleka bethi Daisy (ukutshala nokunakekela, izithombe izimbali - konke lokhu kwaziswa okubekwe ngayo kulesi sihloko) uyakwazi wengeze nento ethandekayo iyiphi engadini. Ingasetshenziselwa ekuklanyweni mixborders, rabatok, imingcele futhi njengoba izitshalo ebhodweni, akuve kukuhle futhi lichaza ekwakheni sezimbali. Abalimi abaningi umkhuba sesigaba yonyaka ehlathini ukuze uthole inflorescence enkulu ohlangeni eside ngoba ahlabayo. Njengoba partner engadini Daisy cornflowers efanelekayo, bluebells, delphinium, ngaphezu, yena ngokuphelele ubeka off nezihlahla zokuhlobisa kanye lezihlahla.
Kanjani ukwenza iloli ihange ngezandla zabo: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Izinhlobonhlobo best of violets (isithombe). Zezintaka violets nokunakekela
Ukuthenga ngesikhathi indali ekuyi-Internet
I-Algorithm ekwakheni amatafula weqiniso ezinkulumo ezizwakalayo